Dowladda Japan oo burburineyso tareeno cusub oo casri ah | YoobsanNews.com
Dowladda Japan oo burburineyso tareeno cusub oo casri ah
Dowladda Japan ayaa sheegtay in ay burburineyso toban tareen oo ah kuwa cusub oo casri.
Tareenadan oo ah kuwa loo yaqaano bullet, ganfuurkoodana u muuqaal eg xabadda, ahna kuwa aadka u dheereeya ayay dowladda sheegtay in ay furfuri doonto, oo ay ka dhigi doonto biro isbeer ahaan loo adeegsan doono.
Tareenada ayaa waxaa galay daadad ka dhashay roobab mahiigaan ah oo wato duufaano, kuwaas oo maalma ka hor ka da’y dalkaas.
Biyaha ayaa liqay oo buux dhaafiyay tareenada, oo waxaa ay gudaha u galeen halkii ay rakaabka fariisnayeen, sidoo kalena waxaa ay waxyeleyeen matoorka iyo agabkii kale ee casriga ahaa ee ku rakibnaa tareenada, kuwaas oo haddii ay biyo taabtaan aanan shaqeyneyn.
Inkastoo dowladda dalkaas ay sheegtay in gebi ahaanba ay burburin doonto tareenadaas, ayaa hadana wali waxaa laga heli karaa biro badan oo nacfi leh, markalena dib loo isticmaali karo.
Madaxa shirkadda East Japan Railway, Yuji Fukasawa ayaa sheegay: ” Daadadka waxaa ay saameyeen oo waxyeelo gaarsiiyeen meelo muhiim ah oo ay ka mid yihiin matoorada iyo bareega tareenada, oo haddii ay biyo taabtaan ay adag tahay in ay shaqeyaan”.
Waxaa kale oo uu sheegay in sababta loo badelayo ay tahay badqabka rakaabka, taas na ay keeneyso in la badelo oo la keeno kuwa cusub. Halkii tareen ayay warbaahinta dalkaas kusoo warranatay in qiima ahana u ku fadhiyo lacag dhan 135 milyan oo doolar, waxaana ay ka dhigan tahay in Jpaan ay khasaartay inkabadan hal bilyan oo doolar.
Khadadka tareenka ayaa xiliga ay daadadka galayeen la sheegay in ay yaaleen boostaajo ku taalo Magaalada Nagano ee dalka Japan.
Duufaanta Hagibis oo ku socotay xawaaro dhan 225 kilomitir saacadiiba ayaa bishii la soo dhaafay ku dhufatay qeybo badan oo ka mid dalka Japan, waxaana ku dhintay dad gaaraya 90 qof, halka kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen.
Duufaanta Hagibis ayaa la sheegay in ay ahayd tii ugu xumeyd ee soo marta dalka Japan.
Sawiro laga qaaday tareenada oo dhex-fadhiya biyaha ayaa calaamd u noqday baaxadda ay la egtahay dhibaatada ka dhalatay daadadka.
Tareenada ayaa midkiiba waxaa ku xirnaa 12 madax, waxaana ay isaga kala gooshi jireen Magaalooyinka Hokuriku-Shinkansen, oo waxaa ay caasimadda dalkaas ku xiri jireen gobolada galbeedka ee dalka Japan.
Tareenada halaabay ayay Dowladda sheegtay in ay hayeen boqolkiiba labaatan tareenada laga isticmaalo Japan, oo ay saameyn ku yeelan doonto adeegyadii ay bixin jireen, waxaana madaxa shirkadda tareenada uu sheegay in dhamaan adeegyadaas ay soo celi doonaa kahor dhamaadka sanadkan 2019-ka.
Previous: Baarlamaanka Puntland oo goor dhawayd xilka ka qaaday Guddoomiyihii Baarlamaanka C/xakiin Dhoobo Daareed
Next: Haweeneydii aflagaadeysay madaxweyne Trump oo xil loo doortay.